Amiodarone (အေမီရိုဒရုန်း) : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
သောက်သုံးနည်း နှင့် သိမ်းဆည်းနည်း
Amiodarone ကို မည်သည့်အကြောင်းအရာများအတွက် အသုံးပြုကြပါသလဲ။
Amiodarone ကို အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ နှလုံးခုန်မမှန်မှု (ဥပမာ persistent ventricular fibrillation/tachycardia) ကို ကုသဖို့အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။ သူ့ကို ပုံမှန်နှလုံးခုန်သံကို ပြန်ရောက်ဖို့နဲ့ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ Amiodarone ကို နှလုံးခုန်မှန်ဆေးလို့ ခေါ်ပါတယ်။ သူဟာ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ နှလုံးအတွင်း လျှပ်စစ်လှိုင်းတွေကို ပိတ်ဆို့ပေးပါတယ်။
Amiodarone ကို ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်ပါသလဲ။
ဒီဆေးကို သောက်ဆေးအဖြစ် တစ်နေ့ကို တစ်ကြိမ် (သို့) နှစ်ကြိမ် (သို့) ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းသောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ အစာနဲ့သော်လည်းကောင်း အစာမပါပဲသော်လည်းကောင်း သောက်နိုင်ပေမယ့် တစ်မျိုးတည်းကိုသာ ရွေးချယ်ပြီး အမြဲတမ်းသောက်သင့်ပါတယ်။
ဒီဆေးသောက်နေစဉ် Grapefruit စားခြင်း (သို့) Grapefruit ဖျော်ရည်သောက်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ Grapefruit ဟာ ဒီဆေးရဲ့ ပမာဏကို သွေးထဲမှာ များစေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ဆေးပမာဏဟာ သင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ ကုသမှုကို တုန့်ပြန်မှုပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ ဆိုးကျိုးတွေကို လျော့ကျစေဖို့ သင့်ဆရာဝန်က ဒီဆေးကို ပမာဏအနည်းဆုံးကနေ စပေးပြီး တဖြည်းဖြည်း တိုးမြှင့်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ကို မတိုင်ပင်ပဲ ဆေးကိုရပ်လိုက်ခြင်း၊ ဆေးပမာဏပြောင်းလဲခြင်းတွေ မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။
ရောဂါလက္ခဏာတွေ မသက်သာ ရင် (သို့) ပိုဆိုးလာရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။
ဆေးအများစုမှာ အခန်းအပူချိန်တွင် သိုလှောင်ထားနိုင်ပါတယ်။
Amiodarone ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Amiodarone ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Amiodarone ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။
လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Amiodarone ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Amiodarone ကိုမသောက်သုံးခင်မှာ ဘယ်အချက်အလက်တွေကို သိထားသင့်သလဲ။
Amiodarone မသောက်ခင် အောက်ပါအခြေအနေတွေ ရှိရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။
• Amiodarone (သို့) Iodine (သို့) အခြားဆေးတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်ရင်
• အခြားဆေးတွေ၊ ဗီတာမင်တွေ၊ ဖြည့်စွက်စာတွေ၊ herbal ထုတ်ကုန်တွေ သောက်နေတာ ရှိရင်။ အောက်ပါဆေးတွေသောက်နေတာရှိရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။
• စိတ်ကျရောဂါသက်သာဆေး။ ဥပမာ- trazodone
• သွေးကျဲဆေး။ ဥပမာ- warfarin (coumadin)
• အချို့အဆီကျဆေး။ ဥပမာ- atorvastatin (lipitor) ၊ cholestyramine (questran)၊ lovastatin (mevacor)၊ simvastatin (zocor)
• cyclosporine (neoral, sandimmune)
• fentanyl (actiq, duragesic)
• hiv protease inhibitors such as indinavir (crixivan) ၊ ritonavir (norvir)
• loratadine (alavert, claritin)
• ဆီးချိုဆေး ၊ အတက်ကျဆေးများ
• methotrexate (rheumatrex)
• rifampin (rifadin, rimactane)။
အခြားဆေးတွေဟာလည်း ဒီဆေးနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်တာကြောင့် သောက်နေတဲ့ဆေးတွေအကုန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က ဆေးပမာဏပြောင်းလဲခြင်း (သို့) ဆိုးကျိုးတွေကို စောင့်ကြည့်ခြင်းတွေ ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
• အခြား တိုင်းရင်ဆေး အပင်ထုတ်ကုန်တွေ သောက်နေရင် (အထူးသဖြင့် st.John’s wort)
• ကိုယ်ဝန်ရှိရင်၊ ကိုယ်ဝန်ယူဖို့ စိတ်ကူးရှိရင်၊ ကလေးနို့တိုက်နေရင်။ ဆေးသောက်နေစဉ် ကိုယ်ဝန် ရှိသွားရင် ဆရာဝန်ကိုပြောပြသင့်ပါတယ်။
• အသက် ၆၅ နှစ်နဲ့ အထက်ဖြစ်ရင် ဒီဆေးရဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကို ဆရာဝန်နဲ့ မေးမြန်းတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ အသက်ကြီးသူတွေမှာ ဒီဆေးဟာ အခြားဆေးတွေလောက် လုံခြုံစိတ်ချမှုနဲ့ အာနိသင်မရှိတာကြောင့် မသောက်သုံးသင့်ပါဘူး။
• ခွဲစိတ်မှု နဲ့ သွားခွဲစိတ်ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်
• မလိုအပ်ပဲနေရောင်ခြည်နဲ့ အချိန်အကြာကြီး ထိတွေ့မှုကို ရှောင်ရှားသင့်ပြီး နေရောင်ခြည်ထံမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အဝတ်အစားတွေ၊ နေကာမျက်မှန်၊ နေပူခံလိမ်း ဆေးတွေကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ဒီဆေးဟာ နေရောင်ကို ပိုမိုခံရနိုင်စေပါတယ်။ အရေပြားဟာ မီးခိုးပြာရောင်ဖြစ်သွားပြီး ဆေးရပ်လိုက်ရင်တောင် ပုံမှန်ပြန်မဖြစ်နိုင်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
• ဒီဆေးဟာ ရာသက်ပန်မျက်စိကွယ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဆေးကုသနေစဉ် မျက်စိကိုပုံမှန်စစ်ဆေးဖို့ လိုပြီး မျက်စိက အလင်းရောင်ကို ခံနိုင်ရည်မရှိရင် (သို့) အလင်းကွင်းတွေ မြင်ရင် (သို့) အမြင်အာရုံဝါးရင် ဆရာဝန်ကို ပြသသင့်ပါတယ်။
• ဆေးရပ်ပြီး လပေါင်းများစွာအထိ ဆေးဟာ ကိုယ်ခန္ဓါအတွင်းမှာ ကျန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆိုးကျိုးတွေကိုလည်း ဆက်လက်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးပေးတဲ့ ဆရာဝန်ကို ဆေးသောက်ရပ်လိုက်ရင် အခြားဆေးညွှန်းမလာဆိုတာကို မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် D ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။
• B=လေ့လာမှုအချို့အရ ဆိုးကျိုးမရှိပါ။
• D= ဆိုးကျိုးများရှိသည့် အထောက်အထားများရှိပါသည်။
• X=သောက်သုံး၍မရပါ (လုံးဝမတည့်ပါ)။
• N=အခြေအနေကို မသိရသေးပါ။
Amiodarone က ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်လဲ။
ဓါတ်မတည့်မှု လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ အနီကွက်ထခြင်း၊ အသက်ရှူကျပ်ခြင်း၊ မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ လည်ပင်း ရောင်ရမ်းခြင်းတွေဖြစ်ရင် အရေးပေါ်ကုသမှု ခံယူသင့်ပါတယ်။
အောက်ဖေါ်ပြပါ လက္ခဏာတွေ ရှိရင် (သို့) ဆေးဖြတ်လိုက်ပြီး လပေါင်းများစွာအထိ ဒီအချက်တွေ ရှိနေရင် ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်း အကြောင်းကြားသင့်ပါတယ်။
အသစ်ဖြစ်လာတဲ့ (သို့) ပိုဆိုးလာတဲ့ နှလုံးခုန် မမှန်ခြင်း
အသက်ရှူစဉ် အသံမြည်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ အသက်ရှူကျပ်ခြင်း၊ သွေးအန်ခြင်း
အမြင်အာရုံဝေဝါးခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မျက်လုံးနောက်ပိုင်း နာခြင်း၊ အန်ခြင်း
မောခြင်း၊ ရောင်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်း
ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်း၊ ဆံပင်ပါးခြင်း၊ အပူ၊အအေးလွန်ကဲခြင်း၊ ချွေးထွက်များခြင်း၊ ရာသီ မမှန်ခြင်း၊ လည်ပင်းအတွင်း ရောင်ရမ်းခြင်း
ခြေလက် ထုံကျဉ်ခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊
ပျို့ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ အဖျားတက်ခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ ဝမ်းမည်းမည်းသွားခြင်း၊ ဆီးအရောင်ရင့်ခြင်း၊ အသား၊မျက်လုံးဝါခြင်း။
ပျို့အန်ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ အစားအသောက် ပျက်ခြင်း
အိပ်စက်မှု ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
အရေပြားအောက်မှာ ပူခြင်း၊ ထုံကျဉ်ခြင်း၊ နီရဲခြင်း
ဘယ်ဆေးဝါးတွေက Amiodarone နဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်သလဲ။
Amiodarone ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
သွေးကျဲဆေး ဥပမာ- warfarin (Coumadin);
အင်ဆူလင် (သို့) ဆီးချိုကျဆေးသောက်ဆေး
HIV / AIDS ကုသဆေးဝါး;
ပိုးသတ်ဆေး- azithromycin (Zithromax), ciprofloxacin (Cipro), clarithromycin (Biaxin), erythromycin (E.E.S., eryped, Ery-Tab, Erythrocin), levofloxacin (Levaquin), rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifater, Rifamate), telithromycin (Ketek)
မှိုပိုးသတ်ဆေး – itraconazole (Sporanox) (သို့) ketoconazole (Nizoral);
A beta-blocker such as atenolol (Tenormin), bisoprolol (Zebeta, Ziac), metoprolol (Lopressor, Toprol), propranolol (Inderal, innopran) နဲ့အခြား
အဆီကျဆေး – cholestyramine (Prevalite, Questran), atorvastatin (Lipitor), simvastatin (Zocor), lovastatin (Mevacor), pravastatin (Pravachol), fluvastatin (Lescol);
နှလုံးစည်းချက်မှန်စေသောဆေး- disopyramide (Norpace), quinidine (Quinaglute, Quinidex), or procainamide (Procan, Pronestyl);
သွေးတိုးကျဆေး- diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac), nifedipine (Procardia, Adalat), verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan) နဲ့အခြား
အတက်ရောဂါဆေး- carbamazepine (Carbatrol, Tegretol), phenytoin (Dilantin) နဲ့အခြား
အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာတွေက Amiodarone နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါသလား။
Amiodarone က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။ အထူးသဖြင့် grapefruit ဖျော်ရည်
ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေက Amiodarone နဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိမလဲ။
Amiodarone ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
• အမြင်အာရုံ၊ အကြားအာရုံ ပြဿနာများ
• နှလုံးခုန်နှုန်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
• သွေးအတွင်း potassium နည်းခြင်း
• သွေးအတွင်း potassium များခြင်း
• သွေးအတွင်း magnesium နည်းခြင်း
• အဆုတ်ရောဂါ၊ အခြားအသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါများ
• Thyroid ရောဂါများ
ယခုဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည် ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များနေရာတွင်အစားထိုးရန်မဟုတ်ပါ။ ဆေးမသောက်သုံးခင်မှာ ဆရာဝန်နှင့်ဖြစ်စေ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့်ဖြစ်စေ အမြဲ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ Amiodarone ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
• နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း အတွက် လူကြီးတွေမှာအသုံးပြုရန်
Initial dose: 1000 mg အကြောဆေးသွင်းခြင်းကို ပထမ ၂၄ နာရီအတွင်းတွင် အောက်ပါ ပုံစံနဲ့ပေးပါသည်။
ပထမ ၁၀ မိနစ် ကို 150 mg (15 mg/min)
ထို့နောက် နောက် ၆ နာရီကို 360 mg (1 mg/min)
Maintenance infusion: နောက်ကျန်တဲ့ ၁၈ နာရီကို 540 mg (0.5 mg/min)
Initial dose: Loading doses 800 to 1600 mg/day သောက်ဆေးကို ဆေးကုသမှု တုံ့ပြန်သည်အထိ ပထမ ၁ ပတ်မှ ၃ ပတ်အတွက်လိုအပ်သည်။ (ကြာကောင်းလည်းကြာနိုင်သည်။)
လုံလောက်တဲ့ နှလုံးစည်းချက်ကို ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်ရင် (သို့) ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ သိသိသာသာ ပေါ်လာရင် ဆေးပမာဏကို တစ်လ အတွက် 600 to 800 mg/day သို့ လျော့ချပြီး နောက် maintenance dose ကို အများအားဖြင့် 400 mg/dayနဲ့ ပေးသည်။ အချို့လူနာများသည် ဆေးပမာဏ 600 mg/day လိုအပ်နိုင်သည်။ Amiodarone ကို နေ့စဉ် တစ်ကြိမ်သာအသုံးပြုသင့်ပြီး အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ မခံနိုင်တဲ့ လူနာတွေမှာတော့ တစ်နေ့မှာ နှစ်ကြိမ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေမှာ Amiodarone ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
• Supraventricular Tachycardia အတွက် ကလေးသောက်ရန်
လုံလောက်သော အချက်အလက်များမရှိပါ။ သောက်ဆေး loading dose: 10 to 20 mg/kg/day သောက်ဆေး တစ်နေ့ကို ၂ ကြိမ်ခွဲ၍ ၇ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိပေးနိုင်သည်။ ထို့နောက်ဆေးပမာဏကို5to 10 mg/kg/day နေ့စဉ် တစ်ရက်တစ်ကြိမ်ထိလျော့ချနိုင်သည်။ ထို့နောက် ၂လမှ ၇လ အထိဆက်ပေးနိုင်သည်။ ဒီ protocol ကို တစ်နှစ်အောက်ကလေး အယောက် ၅၀ (၉လအောက်) နဲ့ တစ်လသား (အငယ်ဆုံးတစ်ရက်သားအထိ) တွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ အကြောဆေး loading dose:5mg/kg ၆၀ မိနစ်ကြာအောင်ပေးသည်။
မှတ်ချက်။ ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ Bolus infusion နှုန်းကို 0.25 mg/kg/minute ထက်ပိုမပေးရ။ လေ့လာမှုအများစုကတော့သွေးပေါင်ချိန်ကျဆင်းခြင်း မဖြစ်အောင် bolus infusion အချိန်ကို မိနစ် ၆၀ ကြာအောင်ပေးကြသည်။ initial loading dose ကို အများဆုံး total initial load: 10 mg/kg ထိပေးနိုင်သည်။ သို့သော် နေ့စဉ် စုစုပေါင်းပမာဏ bolus of 15 mg/kg/day ထက်တော့ပိုမပေးရ။
၁ နှစ်အောက်။ Initial dose: 600 to 800 mg/1.73 m²/day သောက်ဆေး ၄ ရက်မှ ၁၄ ရက် ။ တစ်ရက်ကို ၁-၂ ကြိမ်ခွဲပေးနိုင်သည်။
Maintenance dose: 200 to 400 mg/1.73 m²/day သောက်ဆေး တစ်ရက်တစ်ကြိမ်ပေးနိုင်သည်။
၁ နှစ်အထက်။ Initial dose: 10 to 15 mg/kg/day သောက်ဆေး ၄ ရက်မှ ၁၄ ရက် ။ တစ်ရက်ကိုဆေးပမာဏ ၁-၂ကြိမ် ခွဲပေးနိုင်သည်။
Maintenance dose:5to 10 mg/kg/day သောက်ဆေး တစ်ရက်တစ်ကြိမ်
Amiodarone ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုး အချိုးအစားမျိုးတွေနဲ့ရရှိနိုင်မလဲ။
Amiodarone ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
သောက်ဆေးပြား: 200 mg.
• ရီဝေဝေ ဖြစ်ခြင်း
Amiodarone ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Amiodarone (Bulk). http://www.webmd.com/drugs/2/drug-94074/amiodarone-bulk/details. Accessed
Amiodarone. https://www.drugs.com/amiodarone.html. Accessed Aug 15, 2016.
Amiodarone (Oral Route). http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/amiodarone-oral-route/description/drg-20061854. Accessed Aug 15, 2016.